Jesu Anozadzisa Uprofita hwaIsaya | Upenyu hwaJesu
MATEU 12:15-21 MAKO 3:7-12
VANHU VANOMOMOTERA JESU
ANOZADZISA UPROFITA HWAISAYA
Jesu nevadzidzi vake pavanongoziva kuti vaFarisi nevatsigiri vebato raHerodhi vari kuronga kumuuraya, vanobva vatizira kuGungwa reGarireya. Vanhu vakawanda vanouya kwaari vachibva kwose kwose, muGarireya, mumaguta emumhenderekedzo yegungwa eTire neSidhoni, vamwe vachibva kumabvazuva kweRwizi rwaJodhani, vamwe kuJerusarema, nekuIdhumeya iri kumaodzanyemba. Jesu anoporesa vanhu vakawanda. Izvi zvinoita kuti vanhu vane zvirwere zvakakomba vamuunganire. Pane kumirira kuti iye avabate, vari kutomhanyidzana kuti vamubate.—Mako 3:9, 10.
Vanhu vacho vakawanda zvekuti Jesu anoudza vadzidzi kuti vamutsvagire igwa kuitira kuti abve pamhenderekedzo vanhu vasamumomotere. Anokwanisawo kuvadzidzisa ari muigwa iroro kana kuti kukwasva achitevedza mahombekombe achibatsira vamwe vanhu.
Mateu mumwe wevadzidzi vake anotaura kuti basa raJesu rinozadzisa “zvakataurwa pachishandiswa muprofita Isaya.” (Mateu 12:17) Jesu ari kuzadzisa uprofita hupi?
“Tarirai! Mushandi wangu wandakasarudza, anodiwa wangu, akafarirwa nomweya wangu! Ndichaisa mudzimu wangu paari, uye achabudisa pachena kumarudzi kuti kururamisira chii. Haazokakavari, kana kushevedzera, uyewo hapana munhu achanzwa inzwi rake mumigwagwa yakafara. Hapana tsanga yakakuzvuka yaachapwanya, uye hapana tambo inopfungaira yomufurakisi yaachadzima, kusvikira aita kuti kururamisira kubudirire. Chokwadi, marudzi achava netariro muzita rake.”—Mateu 12:18-21; Isaya 42:1-4.
Hapana mubvunzo kuti Jesu ndiye ari kunzi mushandi wandinoda naMwari. Jesu anonyatsobudisa pachena chinonzi kururamisira kwechokwadi, uko kuri kudzikatidzwa netsika dzechitendero chenhema. Vachishandisa Mutemo waMwari zvisina kururama, vaFarisi havakwanisi kunyange kubatsira munhu ari kurwara paSabata! Achiratidza kuti Mwari anotonga zvakarurama uye achida kuratidza kuti mudzimu waMwari uri paari, Jesu anobatsira vanhu kuti vasaremedzwe netsika idzi dzisina kururama. Saka izvi zvinoita kuti vatungamiriri ava vade kumuuraya. Vane pfungwa dzakashata zvechokwadi!
Mashoko okuti “haazokakavari, kana kushevedzera, uyewo hapana munhu achanzwa inzwi rake mumigwagwa yakafara” anorevei? Paanoporesa vanhu, Jesu haadi kuti vafambe vachitaura nezvake. Anoudza kunyange madhimoni ‘kuti asaita kuti azivikanwe.’ (Mako 3:12) Haadi kuti vanhu vamuzive vachiita zvekushambadzirwa mumigwagwa kana kuti vachiudzwa nevanhu vanotaura nepasipo zvaanenge aita.
Jesu anoendawo nemashoko ake anonyaradza kuvaya vakaita setsanga dzakakuzvuka, dzakatyorwa. Vakaita setambo inopfungaira, yava pedyo nokudzima. Jesu haabve apedzisa tsanga yacho yakakuzvuka kana kudzima tambo iri kupfungaira. Asi anotomutsa vanyoro nerudo uye nounyoro. Zvechokwadi, Jesu ndiye munhu anopa marudzi tariro!
Jesu anoratidza sei kururamisira asingakakavari kana kudanidzira mumigwagwa?
Ndivanaani vanofananidzwa netsanga yakakuzvuka uye tambo iri kupfungaira, uye Jesu anovabata sei?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kuzadzisa Uprofita hwaIsaya